converter များစုဝေးရာ(1) - Page9- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
16-09-2010, 02:01 PM
အသုံးနည်းကိုတော့သိတဲ့သူများရှင်းပြကြပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်မှာရှိတယ် ကွန်ဗာတာတွေကိုတင်ပေးထားပါတယ်
VSO.Software.ConvertXtoDVD.v2.2.3.258h-TE.rar (8.4 MB)
Witcobber.RM.to.AVI.MPEG.WMV.VCD.SVCD.DVD.Converter.v5.1.rar (8.1 MB)
Witcobber.Super.Video.Converter.v5.1.WinAll.Incl.Keygen-CRD.rar (2.1 MB)
Witcobber.WMV.to.AVI.MPEG.WMV.VCD.SVCD.DVD.Converter.v5.2.WinAll.Incl.Keygen-CRD.rar (2.2 MB)
Plato.DVD.Creator.v3.72.rar (7.5 MB)
Power.Video.Converter.v1.5.51.WinAll.Incl.Keygen-TWK.rar (2.6 MB)
Speed.Video.Converter.v3.0.49.WinAll.Incl.Keygen-CRD.rar (2.6 MB)
Star.ASF.Converter.v1.2.4-BRAiGHTLiNG.rar (4 MB)
Star.Video.Converter.v1.2.5-BRAiGHTLiNG.rar (5.8 MB)
Star.DivX.Converter.v1.2.4-BRAiGHTLiNG.rar (4.9 MB)
ချစ်သားငယ်လေး, ဇေယျာအေး, creative2020202020, KznT, moe san dar, phoetharlay, thureinsoe, zin min aung, zo
ပြန်စာ - KING Of Converters(All Converters of the World)
Xilisoft DVD to MP4 Converter v4.0.52.0630လေးကို သီသန့်ပြန်တင်ပေးပါအုန်း
Xilisoft DVD to MP4 Converter v4.0.52.0630 ထက် မြင့်တဲ့ နောက် Version ( ၂ ) မျိုး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Xilisoft_DVD_to_MP4_Converter_6.0.5_Build_0624.zip 29.303 MB
Xilisoft_DVD_to_MP4_Converter_v5.0.49.0310.rar 9.895 MB
ဒီ တစ်ခုကတော့ Video.Audio.Converters အားလုံးပါတဲ့ Xilisoft.Complet-Pack ပါ ပမာဏတော့ နည်းနည်းများပါတယ်။ လိုမယ်ဆို ယူနိုင်ပါတယ်။ Patch တွေ Keygen တွေ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်။ အထဲမှာ ပါဝင်မယ့် Converter တွေကတော့ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းပါ။
Xilisoft.Complet-Pack.All.Video.Audio.Converters.Incl.Keygen-Lz0-EiTheL_ALLTEAM.rar 89.893 MB
Last edited by KznT; 30-09-2010 at 01:36 PM..
ခွန်ညီး, မောင်တေဇာဝင်း, မောင်ပေါ်ဦး, hellboy, koko2006, moe san dar, tu tu, zin min aung
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာမိသားစုက ဗီဒီယိုဖိုင်တွေက avi တွေဆိုတော့ တချို့ စက်တွေမှာ အခက်အခဲရှိတတ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဒီ လေးနဲ့ပြောင်းပြီကြည့်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ ခွင့်လွတ်ကြပါဗျို့ ။
ကျွန်တော်လည်း မြန်မာမိသားစုဝင်တစ်ယောက်ဆိုတော့ ပို့ စ် တစ်ခုလောက်မှမတင်ရရင် တာဝန်မကျေဘူးလို့ခံစားမိလို့ ပါ။
Find More Posts by မထက်
Altdo.AVI.MPEG.RM.WMV.MOV.ASF.to.DVD.VCD.Converter.and.Burner.v4.2.rar (5 MB)
မထက်ပြောတဲ့ဟာလိုချင်ရင်တော့ ဒီနေရာမှာ သွားယူလို့ရပါတယ် အဆင်ပြေပြေသုံးနိုင်ပါစေ
မထက်, moe san dar, zin min aung
Originally Posted by မောင်ပေါ်ဦး
ပြောင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် ။မြန်မာမိသးစုက ရုပ်ရှင်တွေကိုပြောင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေလို့ကူညီပေးပါအုံးနော်။
ပို့စ် 90 ခုအတွက် 441 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ipod covertor လေးပါ...ipod အသုံးပြုသူတွေအတွက် တင်ပေးထားပါ..ပို့လ်ရှိပြီးသာဆိုရင် ပေါင်းပေးပါ..
ipod အသုံးပြုသူတွေအတွက် အဆင်ပြေအောင် တင်ပေးထားပါ..Google ကနေရှာပြီး တင်ပေးထားပါ...ကျွှန်တော်
လည်း လက်ရှိအသုံးပြုနေပါတယ်...သူ့ရဲ့ ဝယ်ဈေးကတော့ http://download.cnet.com/4Media-iPod...-10786607.html ၂၉ဒေါ်လာရှိပါတယ်...ipod and iphone အတွက်ပါ....အသုံးပြုပုံက
ကျွှန်တော်ကိုယ်တိုင် တင်ပေးထားတာပါ...ကြိုက်တဲ့နေရာကနေ ဒေါင်းပါ...Mediafire က ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိ
ဘူး တင်ရတာ နည်းနည်းခက်နေတယ်ဗျာ....အဆင်မပြေရင် ပြောပါခင်ဗျား...
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ Emc Arkar အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
bonge, KznT, mercury, moe san dar, zin min aung
Emc Arkar ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Emc Arkar
Xilisoft Video Converter Ultimate v6.0.7.0707 + Key
2) Read The File ReadMe For Key
ကိုဦး, decemberdec, moe san dar, zin min aung, zo
ကိုဦး, စစ်တွေသားချေ, ပုထုဇဉ်, သက်နိုင်, arkaraung, azp09, bonge, hellboy, moe san dar, zin min aung, zo
ပြန်စာ - rmvb to DVD,SVCD,VCD Converter
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ phyomyintthein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
bonge, moe san dar, thureinsoe
ပြန်စာ - Total Video Converter HD v3.71 + Serials
ကျေးဇူးတင်စကားထပ်ပြောရင်း...serial numbers တွေကိုဘယ်မှာသွားကြည့်ပြီး..register လုပ်ရမလဲ
Last edited by tu tu; 27-11-2010 at 05:18 AM.. Reason: edit quote
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ပုထုဇဉ် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပို့စ် 11 ခုအတွက် 36 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဒီမှာ converter တွေတော့အများကြီးပဲ ကျွန်တော်လိုချင်နေတာ ကျွန်တော်လိုက်ရှာနေတာပါလားတောင်မသိဘူး ကျွန်တော်ဖိုရမ်ထဲမှာ မေးထားတာ သုံးလေးရက်ရှိနေပြီ ဘယ်သူမှလည်းမဖြေပေးဘူး
သိတဲ့သူရှိရင်ပြောပေးပါဦး ဒီ converter တွေက convert လုပ်ရင် Input မှာ subtitle ဖိုင်ကိုပါထည့်ပြီး တစ်ခါထဲဗီဒီယိုကို
စာတမ်းထိုးအနေနဲ့ထုတ်ပေးပါတယ် ခက်တာက ကျွန်တော်ထိုးချင်တာက မြန်မာစာတမ်းထိုးချင်တာ zawgyione subtitle ဖိုင်ကိုပေါင်းချင်တာ ကျွန်တော် ရှာနိုင်သလောက် converter တွေစုံနေပြီ ဒီအထဲကတစ်ချို့ဟာတွေတော့မသုံးဖူးသေးဘူးပေါ့ zawgyione ကိုမပေါ်ဘူး လေးထောင့်တွေ သင်္ကေတတွေပဲပေါ်တယ်
အဲ့ဒါကြောင့် zawgyione subtitle ကို support လုပ်မယ့် converter လိုချင်လို့ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကိုဇေယျ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ကိုဇေယျ
Originally Posted by ပုထုဇဉ်
ဒီနေ့မှ သတိထားမိတယ် - ကျေးဇူး ကိုဇဉ် - ( ပုထုလို့ ခေါ်တာ မကြိုက်ဘူး ဆိုလို့ )
ဒီလိုဗျ ကိုဇဉ်ရ - ကျွန်တော်ဖိုရမ်မှာ ဟိုနားဝင်ရေး ဒီနားဝင်ရေးနဲ့ ရေးထားတဲ့ နေရာတွေက များတော့ တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ ကျွန်တော့် Mail ထဲကို ဝင်တဲ့ ပြန်စာတွေကလည်း တော်တော်များတယ် - ဝင်လာတဲ့ စာတိုင်းကို ကြည့်ဖြစ်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေကျရင် converter များစုဝေးရာ(1) ဆိုတာလိုမျိုး လူတိုင်းဝင်ပြီး တင်တတ် ရေးတတ်တဲ့ နေရာမျိုးကျ သေသေချာချာ မကြည့်ဖြစ်ဘူး - တစ်ခြား Software တစ်ခု တင်တာလို့ပဲ ထင်ပြီး Mail ကို တစ်ခါတည်း Trash ထဲ ထည့်ထည့် ပစ်လိုက်တယ် - အဲလိုမဟုတ်ပဲ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ဆီ တိုက်ရိုက်လာတဲ့ စာမျိုးတွေ ရှိရင်တော့ ဖတ်မိပေမယ့် စာပြန်ဖို့ကျတော့ တစ်ခါတစ်လေ အလုပ်က တစ်ဖက် - တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်ညစ်နေတာတွေနဲ့ ရောပြီး ချက်ချင်း မပြန်ဖြစ်ရာကနေ နောက်စာတွေက ရှေ့စာတွေကို ထပ်ပြီး ပျောက်ပျောက်သွားတာနဲ့ စာပြန်ဖို့ မေ့မေ့သွားတယ် - အခုအဆင်ပြေသွားပြီ ဆိုတော့ ဝမ်းသာပါတယ် - Sorry ပါ bro - နောက်ကို ဂရုစိုက်ပေးပါ့မယ် - အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ အကူအညီတောင်းလိုက်လို့ ကျွန်တော့်ဆီက ပြန်စာမရရင်လည်း စိတ်ထဲ ဘယ်လိုမှ သဘောမထားပဲ နောက်တစ်ကြိမ် စာထက်ပို့ပေးပြီး အသိပေးပေးပါ - ခုလို အသိပေးတာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bro
Last edited by KznT; 01-12-2010 at 06:58 PM..
ကိုဦး, ပုထုဇဉ်, HTUT KHAUNG, ko lin, moe san dar, thureinsoe, zin min aung
ရှိသေးရင် ပြန်တင်ပေးပါဦးဗျာ... link က အလုပ်မလုပ်တော့လို့ပါ...
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ comic_ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အကိုရေ ကျွန်တော်တွေ့တာလေးတော့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အဆင်ပြေပြေသုံးနိုင်ပါစေ။အောက်မှာယူပါ
thureinsoe, zin min aung
မြန်မာမိသားစု ဖိုရမ်မှာ ညီအကိုမောင်နှမများ ခင်ဗျာ...........
.vcr to videos files converter လေးတစ်ခုလောက်လိုချင်လို့ပါ......
Burn directly to DVD or save as digital avi or mpeg fil
Last edited by tu tu; 03-01-2011 at 09:31 PM.. Reason: edit quote
ကိုနေတိုး ရဲ့ညီ ကိုကျော်တိုး ရေ WinAVI Video Converter .အဲဒါလေး တွေ့လို့လမ်းကြုံတာနဲ့ဆွဲလာခဲ့တယ်။ အထဲမှာ ကီးပါတယ်ဗျာ ။ အလကားပေါ့ဟုတ်လား။
Window7နဲ့လည်းအဆင်ပြေစွာဖြင့်သုံးနိုင်ပါသည်။။။။
Last edited by amaung344; 04-01-2011 at 06:01 PM.. Reason: password
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ amaung344 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကျော်တိုး, KznT, moe san dar, phoetharlay, tu tu
4.7 dvdလေးကခွေစာလောက်ကို 4.7 dvd တစ်ခွေထဲရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ ဦးဇင်းအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အရေးတကြီးလို့အပ်နေလို့ပါ။မိသားစုဝင်တွေထဲက သိတဲ့သူဖြေပေးကြပါဦး၊
:4:[COLOR="Blue"]သင် အောင်နိုင်သူဖြစ်လို့ မာနတက်နေတာလား သင့်အထက်မှာ အနည်းဆုံး မိုးကောင်းကင်တော့ ရှိသေးတယ်နော်။[/COLOR]:4:
:14:[COLOR="Purple"]သင် ကျရှုံးလို့ စိတ်ညစ်နေလား သင်အောက်မှာ အနည်းဆုံး မြေကြီးတော့ ကျန်ပါသေးတယ်ကွာ[/COLOR]။:14:
ဦးဇင်းဘုရား dvd တစ်ခွေထဲရအောင်လို့ ကူးချင်တာက video လားပုံလား mp3 လာဆိုတာမသိရတော့ပြောပြဖို့ခက်တယ်
ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ ကိုဂျစ်တူးရေးပေးထားတာရှိပါတယ်ဘုရားအဆင်ပြေမှာပါ မရရင်တော့ Video ဖော်မက်ဆော့ဝါလ်
Last edited by မောင်ပေါ်ဦး; 06-01-2011 at 02:46 PM..
bonge, hellboy, KznT, moe san dar, yawnathan
Originally Posted by ဦးသိဝါနန္ဒ
4.7 dvdလေးကခွေစာလောက်ကို 4.7 dvd တစ်ခွေထဲရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ ဦးဇင်းအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အရေးတကြီးလို့အပ်နေလို့ပါ။မိသားစုဝင်တွေထဲက သိတဲ့သူဖြေပေးကြပါဦး၊
အရှင်ဘုရား မေးထားတာ သုံးရက်လောက်တောင် ရှိပြီ - တပည့်တော် သိထားတာကို ပိုပြီး တိတိကျကျ ပြောနိုင်ဖို့ စာနဲနဲ လိုက်ဖတ်နေရတာနဲ့ စာပြန်နောက်ကျသွားတာပါ ဘုရား - အရှင်ဘုရား မိန့်တော်မူထားတဲ့ 4.7 dvd လေးခွေစာလောက်ကို 4.7 dvd တစ်ခွေထဲရအောင်ဆိုတာ ဘယ်လို files အမျိုးအစားတွေကို ညွှန်းချင်တာပါပဲ ဘုရား - တပည့်တော် သိထားသလောက်က အထက်ဖော်ပြပါ ဖိုင် အမျိုးအစားတွေနဲ့ 4.7 dvd လေးခွေစာလောက် ပမာဏ ရှိတဲ့ data တွေကို dvd တစ်ခွေ စာလောက်တည်း ဖြစ်အောင် လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် နည်းလမ်းက data တွေကို highly compress လုပ်ပစ်လို့ ရမယ့် နည်းလမ်း တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ် ဘုရား - ဒါပေမယ့် တပည့်တော်တို့ အဲလို highly compress လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ compress လုပ်မယ့် ဖိုင်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး compression ratios အနိမ့်အမြင့် ရှိပါတယ် ဘုရား - အကယ်၍ တပည့်တော်တို့ ချုံ့မယ့် ဖိုင်အမျိုးအစားတွေက text file အမျိုးအစားဖြစ်မယ်ဆိုရင် redundant/repeating information လို့ခေါ်တဲ့ unwanted space တွေ များများစားစား ပါတာမို့လို့ compression ratios ကောင်းကောင်း ( ချုံ့လိုက်ရင် ဖိုင် size သေးသေး ) ရတတ်ပါတယ် ဘုရား - တစ်ခြားဖိုင် အမျိုးအစားတွေ ဆိုရင်တော့ အနည်းနဲ့ အများ ကွာခြားချက်ပါတယ် အရှင်ဘုရား - data တွေကို highly compress လုပ်ဖို့ အတွက်ဆို တပည့်တော်တို့ သုံးနေကျ winrar - winzip - 7zip - UHARC စသဖြင့် မျိုးစုံရှိပေမယ့် တပည့်တော် သိထားသလောက် highly compress လုပ်မယ်ဆိုရင် အသင့်တော်ဆုံးက KGB Archiver ပါ ဘုရား - ဒါပေမယ့် KGB Archiver ကို သုံးမယ်ဆိုရင် highly compress လုပ်ဖို့ ကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် တပည့်တော်တို့ အတွက် စဉ်းစားစရာ တစ်ခုရှိတာ KGB Archiver က တပည့်တော်တို့ ချုံ့မယ် ပမာဏပေါ် မူတည်ပြီး hardware requirements အရမ်းစကားပြောပါတယ် အရှင်ဘုရား - သူ့ မူရင်း ဆိုဒ်မှာ ဖော်ပြထားချက်အရ processor with 1,5GHz clock and 256MB of RAM ဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်း လက်တွေ့ KGB နဲ့ အကျွမ်းတဝင် ရှိသူတွေ ဆိုတဲ့ စကားအရ RAM2GB or3GB လောက်ရှိမှ ပိုအဆင်ပြေတယ်လို့ သိရပါတယ် ဘုရား - ဘာကြောင့်လည်းဆို KGB Archiver က တပည့်တော်တို့ အောက်မှာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း compression level အဆင့် ( ၁၀ ) ဆင့်ရှိပြီး တပည့်တော်တို့ အနေနဲ့ ဖိုင်တစ်ခုခုကို compress လုပ်တဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒီ့ compression level အဆင့် ( ၁၀ ) ဆင့်ထဲက Minimal > Good နှစ်သက်ရာ compression level ကိုသုံးပြီး compress လုပ်လိုက်တဲ့ ရလာဒ်ဟာ တစ်ခြား Archiver တွေမှာ သုံးပြီး ရတဲ့ ရလာဒ်နဲ့ သိပ်အများကြီး မကွာလှပေမယ့် Very good > Maximum ထဲက ကြိုက်ရာ တစ်ခုကို သုံးမယ်ဆိုရင် တစ်ခြား Archiver တွေမှာ သုံးပြီး ရတဲ့ ရလာဒ်နဲ့ compression ratios သိသိသာသာကွာတာ တပည့်တော် သတိထားမိခဲ့ပါတယ် - တပည့်တော် ဆိုလိုတာ KGB က တစ်ခြား Archiver တွေထက် ပိုပြီး compress လုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာပါ ဘုရား -
ဒါပေမယ့် တပည့်တော်တို့ အတွက် ချွင်းချက် တစ်ခုရှိနေတာက တပည့်တော် အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့ compression level မြင့်လေ Memory စားလေ ဆိုတဲ့ အချက်ပါ - ဒါကို တပည့်တော်တို့ ဘယ်လို သိနိုင်လဲ ဆိုရင် တပည့်တော် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း compression level ကို ပြောင်းကြည့်တဲ့ အချိန်မှာ ခုလို တွေ့ရပါတယ် အရှင်ဘုရား -
တပည့်တော်တို့ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း compression level မြင့်ရင် Memory consumption အရမ်းများတဲ့ အတွက် hardware requirements နိမ့်မယ့် စက်တွေမှာဆိုရင် KGB Archiver က သုံးဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး ဘုရား - နောက်ပြီး တပည့်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း ဖိုင်တော်တော်များများကို KGB Archiver သုံးပြီး ချုံ့ခဲ့ဖူးပါတယ် - အချိန်တော်တော်ပေးရပါတယ် အရှင်ဘုရား - တပည့်တော်တို့ စက်က hardware requirements ကောင်းမယ်ဆိုရင်တောင် GB လောက် ပမာဏကို ချုံ့မယ် ဆိုရင် တစ်နေကုန်နီးပါးလောက် အချိန်ပေးရမယ့် သဘောမှာ ရှိပါတယ် ဘုရား - တပည့်တော်တို့အတွက် နောက်တစ်ခု ရှိသေးတာ compress လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်တစ်ခုဟာ decompress ပြန်လုပ်ရင် Error တက်မယ် မတက်ဘူး ဆိုတာ ဘယ်သူမှ အာမမခံနိုင်ပါဘူး အရှင်ဘုရား - အဲ့တာကြောင့် ဖြစ်မယ်ဆိုရင် တပည့်တော် အကြံပြုလိုတာ 4.7 dvd လေးခွေစာလောက်ကို 4.7 dvd တစ်ခွေစာ ဖြစ်အောင် လုပ်မယ့် အစား အရှင်ဘုရား ပို့လို့တဲ့ ဖိုင်ပမာဏကို သေသေချာချာ စီစစ်ပြီး ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်လောက်မယ့် ပမာဏအလိုက် အပိုင်းလိုက် ဖြတ်ပြီး ပို့တာ ပိုပြီး သေချာမယ့် အဖြေဖြစ်မယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ် ဘုရား -
အရှင်ဘုရား အဆင်ပြေပါစေ -
သန့်ဇင်ဌေး, မေဇင်သော်, မောင်ပေါ်ဦး, amaung344, AZM, bonge, g00gle, ko myo, moe san dar, thetnaung87, thurein, tu tu, yawnathan
ကျေးဇူးပဲ ကိုပေါ်ဦးနှင့် ကို Knntတို့ရေ ဦးဇင်း လုပ်ချင်တာက videoဖိုင်ကို ပြုလုပ်ချင်တာပါ။ ဇာတ်ကားတွေ ၁၀ကား၁၅ကား ဆန့်တဲ့ပုံဆန်မျုိး တရားခွေတွေကို ပြုလုပ်ချင်တာပါ အခုလို ဖြေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
29-01-2011, 05:09 PM
အခုဒီဆော့ဖ်ဝဲက DVD Ripper, Total Video Converter and iPod to Computer Transferသုံးမျိုး
ကိုသုံးစွဲနိုင်ပါတယ် Converter DVD နဲ့ Video Formates များကို P4, H.264, AVI, MP3, WMV, WMA, FLV, MKV, MPEG-1, MPEG-2, 3GP, 3GPP, VOB, DivX, Mov, RM, RMVB, M4A, AAC, WAV, ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်
သန့်ဇင်ဌေး, မောင်ပေါ်ဦး, arkaraung, moe san dar
27-02-2011, 11:37 AM
ကျွန်တော် တွေ့ ရှိထားတဲ့ converter လေးကို ရှယ်လိုက်ပါတယ်...
converter တွေက များလွန်းလို့တယောက်နဲ့ တယောက် အကြိုက်ချင်း တူချင်မှတူပါလိမ့်မယ်..
ဒါပေမယ့် စမ်းသုံးကြည့်လို့ အဆင်ပြေသွားတော့လည်း အကြိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့....
Format Factory Converter version 2.60 ဒီလင့်လေးကနေ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်...
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ nyinyi mt အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သန့်ဇင်ဌေး, ကျော်တိုး, မောင်ပေါ်ဦး, arkaraung, bagothar85, g00gle, moe san dar
DVD VCD တွေကို burn ပေးတဲ့ tool တစ်ခုပါ
ကိုအောင်, သန့်ဇင်ဌေး, bagothar85, g00gle, moe san dar, zo
30-03-2011, 11:32 AM
Xilisoft Video Converter Ultimate 6.5.3 Build-0310 + Serial
ဒါလေးကတော့ မိသားစုဝင်တော်တော်များများ သိပြီးသားဖြစ်ကြတဲ့ Video Converter ဆော့ဝဲလ်လေးပါပဲ။ အသေးစိတ်သိလိုလျှင်တော့ ဒီနေရာမှာ သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အစ်ကို ကေဇက် မှလည်း ဒီနေရာမှာ တင်ထားပေးပါသေးတယ်။ ကျွန်တော် ဗားရှင်းအသစ်ကလေးကို Serial နဲ့တကွ တွေ့မိလို့ လိုအပ်တဲ့မိသားစုဝင်များ အသုံးပြုနိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်တာပါခင်ဗျာ။ အဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ။
Last edited by bagothar85; 30-03-2011 at 11:37 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ bagothar85 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သန့်ဇင်ဌေး, arkaraung, g00gle, KznT, moe san dar, nyinyi mt, zinwinhtike01, zo
30-04-2011, 10:06 PM
DVD ခွေ တွေမှာ MENU လုပ်တဲ့ဆော့လ်ဝဲလ်လေးပါ။ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတာအဆင်ပြေပါတယ် သုံးချင်တဲ့သူများအတွက်မျှဝေလိုက်ပါတယ်းအဆင်ပြေပြေသုံးနိုင်ကြပါစေ။
arkaraung, bagothar85, KznT, moe san dar, zo
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 12:53 PM